Jereo ny Széchenyi Spa any Budapest | Vaovao momba ny dia
Széchenyi Spa any Budapest
El fitsangatsanganana any Budapest dia feno toerana mahaliana izay tokony ho hitantsika, fa anio dia hiresaka momba ny iray amin'ireo toerana misy tandindona indrindra izy, ny Széchenyi Spa, toerana iray noforonina tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX ho toerana fialamboly izay mbola manana fankamamiana be ihany ankehitriny. Raha mikasa ny handeha ho any Budapest ianao, ity toerana ity dia tokony ho anisan'ireo toerana avo fitsidihana.
El Széchenyi Spa dia iray amin'ireo lehibe indrindra any Eropa ary toerana iray ihany koa izay tsy misy olona tsy mahita amin'ny diany mankany Budapest. Ity tanàna ity dia manome lova lehibe ho antsika miaraka amin'ny parlemantera ao aminy, ny Buda Castle na ny Basilica of San Esteban. Ankoatr'izay, misy spa hafa toa ny Gellert Spa na ny Rudas, na dia tsy isalasalana fa io no malaza indrindra amin'ny rehetra. Andao hahafantatra bebe kokoa momba ity toerana tandindon'ny any Budapest ity.
1 Tantaran'ny spa
2 Jereo ny Spa
3 Fidirana mialoha
4 Spas hafa
Nanomboka ny Spa Széchenyi amin'ny maha tetikasa efa tamin'ny taonjato faha-XNUMX azy, na dia tsy hanomboka amin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX aza izany hitranga izany. Ity spa ity dia notokanana tamin'ny 1913 tamin'ny farany ary nisy fiatraikany lehibe noho ny habeny sy ny isan'ny fandroana tao aminy. Amin'izao fotoana izao dia mbola iray amin'ireo spaoro lehibe indrindra eran'i Eropa izy io. Fantatra erak'izao tontolo izao fa tanàna spa i Budapest, ka malaza be. Manana fandroana mafana roa ambin'ny folo izy io ary loharano misy rano zato eo ho eo. Ny rano mafana amin'ity spa ity dia mivoaka avy amin'ny fantsakana lalina indrindra ao an-tanàna, 1.200 metatra ny halaliny ary 76 degre.
Jereo ny Spa
Ity spa ity dia manana fotodrafitrasa izay amin'ny tranga sasany dia somary lany andro, nefa mbola manintona be ihany. Miaraka amin'ny tapakila dia misy ny fidirana amin'ny faritra fisoloana akanjo sy ny efitrano fanovana. Azo atao koa ny mividy tapakila VIP amin'ny efitrano fisoloana akanjo manokana. Ao amin'ny tobim-pitsaboana dia ho hitantsika ny dobo 15, roa ambin'ny folo amin'izy ireo ao amin'ny faritra anatiny misy faritra fanorana sy saotra. Tena malaza ny dobo ety ivelany. Ny traikefa lehibe dia ny mandeha amin'ny afovoan'ny ririnina ary avelao ho maizina ao amin'izy ireo. Ny mari-pana amin'ireo dobo ivelany dia 37 degre, noho izany dia hahazo aina isika mandritra ny taona. Be olona izy ireo matetika, nefa lehibe dia lehibe, ka tsy hahatsapa ho tototra isika. Ity no toerana malaza indrindra amin'ny spa ary toerana mety indrindra hakana sary. Manodidina ny kamory dia misy ihany koa ny fatana masoandro.
Azonao atao ny mividy ny fidirana amin'ny spa na hamandrika azy amin'ny Internet mialoha, zavatra atolotra anao rehefa fotoam-pahavaratra. Ity tapakila ity dia azo vidiana miaraka amina fanorana. Zava-dehibe ny mahatadidy mitondra flip flop, akanjo ba ary lamba famaohana, na dia manadino aza isika dia atolony antsika any ireto entana ireto. Ny sasany hofan-trano ary ny hafa tsy maintsy vidianay. Izy ireo miaraka amin'ny fidirana dia manome kapaoty lomano ho anay fa ny marina dia saika tsy misy olona mampiasa azy. Raha ny vidiny dia manodidina ny roapolo euro izy io matetika, saingy afaka miova arakaraka ny daty sy ny fangatahana, ka tsara kokoa hatrany ny maka azy mialoha. Ity tapakila ity dia manome antsika ny zony handany tontolo andro ao amin'ny spa ary hampiasa ireo fotodrafitrasa iraisana. Raha mila fanorana na fitsaboana spa isika dia mila mandoa vola misaraka isika.
Budapest dia tanànan'ny spa ary iray amin'ireo Ny Gellert Spa no tena fantatra. Ity spa tsara tarehy ity dia natsangana tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX ihany koa. Ity spa ity dia eo akaikin'ny hotely manana anarana mitovy, na dia teo alohan'ny trano fandraisam-bahiny aza ny pisinina ary manana ny fidirana manokana. Azo atao ny mitsidika azy ireo, na dia tsy maintsy lazaina aza fa ny dobo lehibe, izay zavatra tsara indrindra ananany, dia tsy manana rano mafana, ka tsy dia mahafinaritra amin'ny ririnina. Ny sisa amin'ny fotodrafitrasa toa somary lany andro, saingy ny pisinina lehibe no mendrika jerena, satria tena tsara tarehy izy io ary toerana iray izay azo antoka fa haneno lakolosy satria nisy dokam-barotra nosoratana tao.
Toerana iray hafa an'ny liana amin'ny Budapest dia ny Rudas Baths, fiaviana Ottoman, izay natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Toa izy ireo no heverina ho fandroana Tiorka tsara indrindra eto an-tany, ka mendrika hitsidika azy ireo ihany koa. Ny spa izay haintsika ankehitriny dia natsangana tamin'ny dingana telo. Izy io dia natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX, avy eo nanampy ny dobo filomanosana sy ny sauna tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary nohavaozina indray tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Marihina fa hatramin'ny nanombohany dia toerana natokana ho an'ny lehilahy ihany io. Nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nanomboka nanatrika ny vehivavy ary ankehitriny dia afaka manatrika ny faran'ny herinandro ny lehilahy sy ny vehivavy. Mandritra ny faran'ny herinandro, rehefa tsy maintsy atao ny akanjo ba.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Széchenyi Spa any Budapest
Ny làlana frantsay any Santiago